माटेपानीमा निशुल्क शिविर – Sabaikoaawaj.com
आइतवार, मंसिर ३, २०७४ 7:01:48 AM	मा प्रकाशित
युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि (युआरएल), पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं १२, रोटरी क्लब अफ पोखरा मिडटाउन र रोट¥याक्ट क्लब अफ पोखरा मिडटाउनको आयोजनामा शनिबार पोखरा–१२, माटेपानीमा निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर भएको छ । विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा युआरएलले आयोजना गरेको यो ४१ औं निःशुल्क शिविर हो ।
शिविरमा ४ सय ३ जनाको मधुमेह, रगतमा हुने खराब बोसो (टिजी) र कलेजसम्बन्धी रक्त परीक्षण गरिएको छ । पोखरा १२ का विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा भएको शिविरमा पोखरा, पृथ्वीचोकमा रहेको पेट तथा कलेजो रोग उपचार केन्द्रका वरिष्ठ पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. सुवास भट्टराईले मधुमेह, रगतमा हुने खराब बोसो (टिजी) र कलेजसम्बन्धी रोगबारे प्रकाश पारे ।
उनले जीवनशैली, व्यायाम र खानपानमा मात्र ध्यान दिनसके पछि धेरैजसो रोगबाट बाच्न सकिने बताए । खानपान र जीवनशैलीलाई जीवनको पिलरको संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘हामी कमजोर पिलरमा ठूला भवन बनाउँदै छौं, त्यतिमात्र होइन तला पनि थप्दै छौं ।’ रोग लग्नुअगावै सजग बन्ने र रोग लागिसकेको भए उचित निदान गर्नेतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले निजी संस्था र सामाजिक संस्थाले पनि उद्देश्यमूलक र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । नागरिकका स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना बढ्दै गएको र महानगर यसका लागि प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले युआरएलले हालसम्म २३ हजार बढीलाई निःशुल्क जाँच गरिसकेको बताए । उनले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै प्रदेश नं ४ कै अग्रणी प्रयोगशालालाई समाज र स्थानीयको अधिकतम हितमा लगाउने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
रोटरी क्लब अफ पोखरा मिडटाउनका अध्यक्ष महेन्द्र गोदारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत वडा नं. २ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्की र सञ्चालन रोट¥याक्ट क्लब अफ पोखरा मिडटाउनका अध्यक्ष अनिल लामिछानेले गरेका थिए ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर ३, २०७४ 7:01:48 AM